सुत्ने बेला माता दक्षिणकालीको दर्शन गरेर सुत्नुस, चाहेको सबै पूरा हुनेछ । ईन्कार नगरौ । – iNews16
माता दक्षिणकालीको दर्शन गर्नुहोस, तपाईले चाहेको सबै पूरा हुनेछ!! सेयर लाईक र कमेन्ट गर्न हेला नगरौ अनिष्ट हुन सक्छदक्षिणकाली मन्दिर राजधानी काठमाडौंबाट दक्षिण भेगमा करिब १७ किमिको दुरीमा रहेको छ। यो कालीदेवीको मन्दिर हो। यो मन्दिर राजा प्रताप मल्लद्वारा निर्माण गरिएको हो। यो फर्पिङको मुटुस्थित ऐतिहासिक महत्त्वले भरिपूर्ण मन्दिर हो। चारैतिर हरियालीले सजिएको यो मन्दिर दुई नदीको दोभानमा छ। यो मन्दिरमा कालीको मूर्तिबोहक अन्य देवी देवताको मूर्ति पनि छन्।पहिलेपहिले यो मन्दिरमा देवीकै मुखमा नरिवल फुटाइने गरेकाले देवीका मुखाकृति केही हदसम्म बचेको छ।
Previous पाथिभरा माताले सबैको मनोकांक्षा पुरा गरुन, असार १९ गते शुक्रबार, आज तपाइको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल !
Next आज शनिबार शनि भगवानको दर्शन गरौँ ! उहाँको दर्शन गर्नाले शनि द’शा अन्त्य हुनेछ भने सबै रोकिएका काम बन्नेछन्